गाउँभरिका बिरामीमा कोरोनाको लक्षण, धामी र जडीबुटीकै भर – उज्यालो खबर
गाउँभरिका बिरामीमा कोरोनाको लक्षण, धामी र जडीबुटीकै भर
शुक्रबार, जेठ ०७, २०७८ | ९:२७:१३ |
७ जेठ, जाजरकोट । गाउँभरि घरैपिच्छे बिरामी हुँदा सर्वसाधारण हैरान भएका छन् । जिल्लाका सबै पालिकामा यस्तो समस्या देखिएको छ । कुशे गाउँपालिका अधिकांश गाउँमा ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, जिउ दुख्नेलगायत लक्षण देखिएको छ । गाउँमा सबै बिरामी हुँदा हैरान भएको र आफूलाई समेत सन्चो नभएको रातो नेपालीले बताए । “ गाउँमा कसैको परीक्षण भएको छैन”, नेपालीले भने ।
त्यस्तै, नलगाड नगरपालिकाको कैना, टट्टा, हल्चौर बारेकोटको रामीडाँडा, धौलाकोटलगायत गाउँमा पनि ज्वरोका बिरामीको सङ्ख्या बढिरहेको छ । गाउँभरि शङ्कास्पद बिरामी बढे पनि परीक्षण र उपचार हुन नसकेको हल्चौरका हरिबहादुर खत्रीले बताए । “अधिकांशलाई कोरोना भएको आशङ्का छ, तर परीक्षण र उपचार नहुँदा झारफुक र जडीबुटीको उपचारमा भर परेको छ’, उनले भने, “कयौंपल्ट जनप्रतिनिधिलाई भनियो तर वास्तै गरेनन् ।”
गाउँमा घरघरै बिरामी भए पनि तातोपानी, जडीबुटी र धामीझाँक्रीको झारफुकका भरमा बाँचिरहेको खत्रीले बताए । उनले भने, “सबैजना जडीबुटीकै भरमा छौँ, एकरदुई दिन सञ्चो हुन्छ, फेरि बिमार बल्झिएपछि थला पर्नुको विकल्प छैन ।” परीक्षण गरे गाउँका अधिकांश व्यक्तिमा कोरोना सङ्क्रमण देखिने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सङ्क्रमित व्यक्तिको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा रहेकालाई समेत परीक्षण गरिएको छैन ।
एक सातायता दिनहुँ पानी पर्न थालेपछि बिरामी बढिरहेको खत्रीले बताए । उनका अनुसार चौराटाका झण्डै ५० घरधुरीमा बिरामी नभएको घरै छैन । बच्चादेखि वृद्धसम्म बिरामी परेपछि गाउँमा त्रास फैलिएको उनले बताए । “न परीक्षण हुन्छ न उपचार”, उनले भने, “श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिए मर्नुको विकल्प छैन ।” गाउँभरि ज्वरो, रुघाखोकी र जिउ दुख्ने बिमारका कारण अधिकांश बासिन्दा लखतरान परेको दम्दालाकी भगवती चन्दले बताए । “गाउँको स्वास्थ्यचौकीमा औषधि पनि छैन, स्वास्थ्यकर्मी पनि भेटिँदैनन्”, उनले भने, “अब त घरेलु उपचारकै भर छ ।” स्थानीय सरकारले बिरामीको उपचारमा बेवास्ता गरेको उनको गुनासो छ ।
जनप्रतिनिधिले भने परीक्षण र उपचारको काम सुरु भएको दाबी गरेका छन् । कोरोना परीक्षण र अन्य स्वास्थ्य समस्याको उपचारका लागि गाउँमा स्वास्थ्यकर्मीको टोली पठाएको कुशे गाउँपालिका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतले बताए । “कोरोना हो कि अन्य भाइरल रोग हो भन्नेबारे एकरदुई दिनमै थाहा हुन्छ”, उनले भने, “बिहीबारबाट स्वास्थ्यकर्मीले घरदैलो थालेका छन् ।”
वैशाख पहिलो सातादेखि हालसम्म एन्टिजेन विधिबाट एक हजार ४०० जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार ५०७ को पीसीआरमार्फत कोरोना परीक्षण भएको हो । पिसिआर रिपोर्ट ढिलो आउँदा र परीक्षण गरिएका मानिस आइसोलेशनमा नबस्दा थप सङ्क्रमण फैलिने खतरा बढेको जिल्ला स्वास्थ्य व्यवस्थापक टीकाराम जैशीले बताउनुभयो । उनका अनुसार कार्यालयकै पहलमा कीट किन्न खोज्दा पनि काठमाडौँसमेत कीट पाइएन । स्वास्थ्य कार्यालयले प्रदेश सरकारले पठाएका केही कीट स्थानीय तहलाई समेत वितरण गरेको थियो । खरिद गर्न खोज्दा कीट नपाइएपछि परीक्षणको काम प्रभावित भएको भेरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर घर्तीले बताए ।
पिसिआर र एन्टिजेन दुवै विधिबाट गरिएको परीक्षणबाट जाजरकोटमा ९०० जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । करिब ४०० ले कोरोना जितेका छन् । जाजरकोटमा ५०० सक्रिय सङ्क्रमित रहेको स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक जैशीले बताए । उहाँका अनुसार पछिल्लो समय समुदायस्तरमा सङ्क्रमित बढ्दै गएका छन् । कोराना सङ्क्रमणबाट अहिलेसम्म पाँच जनाको मृत्यु भएको उनले जानकारी दिए । यता नलगाड नगरपालिकाले बिरामीको पहिचान गर्न पाँच टोली बनाएर गाउँगाउँमा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र सिंहले जानकारी दिए ।
कालिका नगरपालिकाद्धारा भूमिहीनलाई पुर्जा दिन नक्साङ्कनकाे प्रकृया थालनी
पुल्चाेक देखि लायन्सचाेक सम्म फोहोरका थुप्रा ! उठाउने कसले ?
मुख्यमन्त्री पौडेलद्वारा नारायणी कटान क्षेत्रको अवलोकन, नियन्त्रणको काम गर्ने प्रतिबद्धता
सिन्धुपाल्चोकमा बाढी पहिरोबाट ७ जनाको मृत्यु : खोज तथा उद्धार जारी